Atens - Ihe ịhụ na ihe ị ga-eme n'isi obodo Gris | Njem zuru oke
Athens bụ isi obodo Gris na otu obodo kachasị ibu na mba ahụ. N'ime ihe karịrị 3000 afọ nke akụkọ ntolite, anyị doro anya na ọ nwere onyinye sara mbara mgbe a bịara ileta ya. Otu n'ime ebe ngosi ya kacha mara nma bu Acropolis, nke gunyere Parthenon dika otu n'ime ndi ozo.
Ọ bụ ezie na ọ dịkwa ebe anyị ga-ahụ Thelọ ihe nkiri nke Dionysus, thelọ Nsọ nke Athena ma ọ bụ Erechtheion. Echiche ya na ihe ochie ya ga-eju gị anya. N’akụkụ ụkwụ ya, anyị hụrụ otu n’ime ógbè ndị ama ama n’obodo Plaka, nwee okporo ụzọ ndị wara wara. N'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ọmarịcha echiche, ọ dịghị ihe dịka echiche nke Licabeto.
Lọ nsọ Zeus ga-alaghachi gị n'oge ya kachasị mma, n'ihi ogidi 17-mita nke ọ ka na-echekwa. Ọ bụghịkwa ihe Agora oge ochie bụ, mana ị ka ga-ahụ ụfọdụ ụlọ dịka Templelọ Nsọ Hephaestus. Gaghị echefu Roman Agora, nke ka nwere akụkụ akụkụ anọ ma nwekwaa ụfọdụ fọdụ dị ka oflọ Eluigwe nke Ifufe ma ọ bụ Ọnụ Gatezọ ofmá Athena nke kwesịrị ka anyị lebara anya mgbe anyị banyere Atens.
Osimiri kacha mma na Atens
por maruuzen eme Ọnwa 3 .
Gris yiri otu osimiri, ọkọchị, oge ezumike ma ọ bụ ịgagharị n'etiti mkpọmkpọ ebe ochie. Ihe a na-emebu bụ ịmata ...
Acropolis nke Athens bu nnukwu akara ngosi nke isi obodo Gris na ihe ngosi nke ebube ...
Monastiraki, ahihia nke Atens
por Luis Martinez eme Ọnwa 8 .
Monastiraki, ahihia a na-efe na Atens, enweghi oke ihe jikọrọ ya na nje ndị a dị egwu. Ọ natara aha a n'ihi na ...
Akụkọ banyere «Onye Nlekọta nke Atens»
Akụkọ banyere onye nlekọta nke Atens, dị ka ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị n'obodo ahụ, sitere na akụkọ ifo ndị Gris….
Mkpụrụedemede na odide nke Gris oge ochie
por Luis Martinez eme Ọnwa 11 .
Mkpụrụedemede na edemede nke Gris oge ochie dị ka nke ndị Finishia kere. Ndị a, sitere na ...
Akụ na ụba nke Atens
por Ezigbo Atens eme 5 afọ .
Athens bụ ebe etiti akụ na ụba, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọdịbendị na Gris. Athens agglomeration na-eme ka onu ...
Sayensị na nkà ihe ọmụma nke Gris
Ndị Greek oge ochie enweghị ọdịiche dị n'etiti nkà ihe ọmụma na sayensị, ma ọ bụ n'etiti usoro ọzụzụ dị iche iche dịka ...
Okpukpe na chi ndị Greek
Poseidon, nwanne Zeus, na-elekọta ọ bụghị naanị oke osimiri, kamakwa ala ọma jijiji na ịnyịnya. Ruru eru…
Ebe omenala kachasị mma na Gris
Onye ọ bụla maara na Gris bụ otu n'ime ebe kachasị mkpa n'oge ochie na nke kachasị ...
Ntụziaka iji mee disk site na nri mmiri na anụ